होम आइसोलेसनमा बसेका सङ्क्रमितलाई डा. रविन्द्र पाण्डेको सुझाव
मुख्य पृष्ठस्वास्थ्यहोम आइसोलेसनमा बसेका सङ्क्रमितलाई डा. रविन्द्र पाण्डेको सुझाव
विराटनगर / कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ ।
यस्तैमा जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रविन्द्र पाण्डेले आफ्नो फेसबुकमार्फत होम आइसोलेसनमा बसेका सङ्क्रमितलाई केही सुझाव दिएका छन् । उनका अनुसार होम आइसोलेसनमा बसेका सङ्क्रमितले थर्ममिटरबाट तापक्रम नापिरहनुपर्ने हुन्छ । ९८/९९ फरेनहाइटसम्म व्यक्तिअनुसार नर्मल तापक्रम हो । तर, शरीरको तापक्रम एक सय वा सोभन्दा बढी पुगेमा भने पारासिटामोल खानुपर्छ ।
शरीर/टाउको दुखेमा पनि पारासिटामोल खान सकिन्छ । तापक्रमका साथै पल्स अक्सिमिटरबाट अक्सिजनको स्तर पनि नापिरहनुपर्ने हुन्छ । शरीरमा अक्सिजनको स्तर ९४ भन्दा तल गएमा घोप्टो परेर सुत्न सकिन्छ । पेटमा दुईवटा सिरानी, टाउकोमा एउटा सिरानी र खुट्टाको गोलीगाँठोनेर एउटा सिरानी राखेर पेटको वलमा सुत्नुपर्छ । यसलाई प्रोन पोजिसन भनिन्छ जसले फोक्सोको क्षमता बढाउँछ । यसलाई प्राकृतिक भेन्टिलेटर पनि भनिन्छ ।
अक्सिजनको मात्रा ९४ भन्दा कम भएमा, ज्वरो आइरहेमा वा खोकी लागिरहेमा, सास फेर्न गाह्रो भएमा वा अन्य गाह्रो भएमा घरमा बस्नु हुँदैन । भाइरसको नयाँ भेरिएन्टले अचानक कोभिड निमोनिया गराउन सक्छ । एक रातमै अवस्था क्रिटिकल हुनसक्ने हुँदा गाह्रो भएमा भोलि अस्पताल जान्छु भनेर बस्नु हुँदैन । नजिकको कोभिड अस्पतालमा गएर चिकित्सकसँग जाँच गराई अवस्थाअनुसार औषधि (एन्टिभाइरल/एन्टिबायोटिक) खानुपर्ने हुन्छ ।
निमोनिया भएमा, अक्सिजको मात्रा कम भएमा अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने हुनसक्छ । अस्पताल प्याक भए पनि त्यहाँ उपचार पाउन सकिन्छ । जाँच नगरी डाक्टरको परामर्शबिना घरमा अक्सिजन दिएर बस्नु हुँदैन । अक्सिजनले रोग निको गर्दैन ।
आवश्यकताअनुसार सामान्य पारासिटामोल, कफ सिरप वा ट्याब्लेट पनि खान सकिन्छ ।
तर, अप्रमाणित औषधि सेवन गरेर वा अन्य सङ्क्रमितलाई निको भएको औषधि खाएर समय र स्वास्थ्य नष्ट गर्नु हुँदैन । भिटामिन सी दुई पटक, जिङ्क दुई पटक, भिटामिन डी हप्ताको एक पटक खानुपर्छ । प्रतिरोध क्षमता रातारात वृद्धि हुँदैन । मरिच, बेसार, अदुवा, ज्वानो, दालचिनी, तुलसी, गुर्जो, जेठीमधु, पिपला, कागतीको रस राखेको चिया पटकपटक खानुपर्छ ।
घरको खानाको अतिरिक्त फलफूल, दुध, गेडागुडी, अण्डा, सुप आदि प्रशस्त खानुपर्छ । बाफ लिँदा आराम हुन्छ । हल्का व्यायाम, पर्याप्त निद्रा तथा बिहान घाम ताप्ने गर्नुपर्छ । आफ्नो मानसिक अवस्थालाई सुदृढ र सबल राखुपर्ने हुँदा आत्तिनु हुँदैन । रक्सी, चुरोट, कोल्ड ड्रिङ्क्स तथा धेरै गुलियो पदार्थको सेवन गर्नु हुँदैन ।
घरमा एकजना सङ्क्रमित भएमा सबैको परीक्षण गराउनु पर्ने हुन्छ । यसपटकको प्रजाति निकै सङ्क्रामक छ । दिनमा एकदेखि दुई पटक मात्र समाचार हेर्ने र सामाजिक सञ्जाल सकभर नचलाउनु नै उचित हुन्छ । अनधिकृत समाचारले तनाव बढाउन सक्छ ।
आइसोलेसन डा. रविन्द्र सुझाव